အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်အတူအလျှော့မပေးဘဲယဉ်ကျေးမှုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။.
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး plug စက်ရုံ
1D အမှတ်တံဆိပ်မီးပွား plug, Japan Ngk, Denso, Spark Plug နည်းပညာနှင့် NTK ကြွေထည်နည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလက်မှတ်ရေးထိုးထားချက်လက်မှတ် ထုတ်ကုန်များသည် Platinum Spark Plug, Iridium Platinum Spark Plug, Iridium Spark Plug, နီကယ် Allow Plug နှင့်အခြားမော်ဒယ်များ။
1D; Customed အပူချိန်မြင့်သောကူးစက်ခံထားရသောပစ္စတင်နှင့်ပစ္စတင်လက်စွပ်များကိုတရုတ်မှထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများသည်ကားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်သောအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။
ပစ္စတင်သည်မော်တော်ကားအင်ဂျင်အင်ဂျင်၏ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကိုဆလင်ဒါအင်ဂျင်တွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပစ္စတင်၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကိုထိပ်, ခေါင်းနှင့်စကတ်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ပစ္စတင်၏ထိပ်သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပုံသဏ္ of ာန်သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အများစုသည်အပြားပြားပြားပြားများကို အသုံးပြု. အပူစုပ်ယူနိုင်သော area ရိယာ၏အားသာချက်ရှိသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ထိပ်တွင်တွင်းရှိတွင်းအမျိုးမျိုးရှိသည့်တွင်းများရှိပြီး၎င်းတို့၏တိကျသောပုံသဏ္ and ာန်, အနေအထားနှင့်အရွယ်အစားသည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အရောအနှောဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
Professional ကအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို piston ကိရိယာအစုံထုတ်လုပ်သူ
1D; ONE Professional ကအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို piston ကိရိယာအစုံထုတ်လုပ်သူ, 32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနေ့စဉ် output ကိုစွမ်းရည် 40,000 PCs ပစ္စတင်, 200,000 PCs လက်စွပ်ပစ္စတင်1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများသည်ကားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်သောအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူ - 1D; တစ်ခု
1D; စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, တစ်ခု, ကုန်တင်ထောက်ပံ့ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာအင်ဂျင်အဆို့ရှင်1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင် Valve ထုတ်လုပ်သူ
China Professional Spark Plug ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု
1D; China Professional Spark Plug ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုထားသော ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။1D အမှတ်တံဆိပ်မီးပွား plug, Japan Ngk, Denso, Spark Plug နည်းပညာနှင့် NTK ကြွေထည်နည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလက်မှတ်ရေးထိုးထားချက်လက်မှတ် ထုတ်ကုန်များသည် Platinum Spark Plug, Iridium Platinum Spark Plug, Iridium Spark Plug, နီကယ် Allow Plug နှင့်အခြားမော်ဒယ်များ။
Professional Spark Plug - 1D; ကုမ္ပဏီတစ်ခု - 1D; ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး
1d; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီးပွားပလပ် - 1D; ကုမ္ပဏီတစ်ခု - 1D, ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,1D; အကောင်းဆုံးသောမီးပွားပလပ်ထုတ်လုပ်သူ Plug ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံစျေးနှုန်း - 1D, တစ်ခု, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,1d; အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမီးပွားပလပ်ထုတ်လုပ်သူ Plug ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံစျေးနှုန်း - 1D; ကုမ္ပဏီတစ်ခု - 1D, တစ်ခု, Facility& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်1D အမှတ်တံဆိပ်မီးပွား plug, Japan Ngk, Denso, Spark Plug နည်းပညာနှင့် NTK ကြွေထည်နည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလက်မှတ်ရေးထိုးထားချက်လက်မှတ် ထုတ်ကုန်များသည် Platinum Spark Plug, Iridium Platinum Spark Plug, Iridium Spark Plug, နီကယ် Allow Plug နှင့်အခြားမော်ဒယ်များ။
လက္ကားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Wather Factory ကောင်းသောစျေးနှုန်း - 1D; တစ်ခု
1D; တစ် ဦး လက်ကားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Water Factory ကောင်းသောစျေးနှုန်း - 1D; တစ်ခု, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်1D လက္ကားအပြောက်များနှင့်အတူ - 1D, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံတီ, ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ISO-2014 အတည်ပြုသည်1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Water စက်ရုံ, ကုန်တင်ထောက်ပံ့ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ
မော်တော်ကားအရည်အသွေးမြင့်မားသောမော်တော်ကားမော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင် Iridium Spark Plug 1D ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
ဂျပန် NGK, denso, မီးပွား plug ကိုနည်းပညာနှင့် NTK ကြွေနည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်နှင့်အတူ 1d အမှတ်တံဆိပ်မီးပွားပလပ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်နှစ်ဆပလက်တီနမ်မီးပွား plug ကို, ပလက်တီနမ်မီးပွားပလပ်, iridium ပလက်တီနမ်မီးပွားပလပ်, iridium မီးပွားပလပ်, မီးပွားပလပ်နှင့်အခြားမော်ဒယ်အလွိုင်းနီကယ်ကိုဖုံးလွှမ်း။
1D Manutacturing နှင့်အတူလူမီနီယံ piston ကြေးနီ piston machining စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်မြင့်သောတိ
piston Ring ကို piston groove ၏အတွင်းပိုင်းသို့ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသည့်ကြီးမားသောအပြင်တိုးချဲ့ပုံပျက်သောအတူသတ္တု elastic လက်စွပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ချုံ့ကွင်းနှင့်ရေနံကွင်း: piston ကွင်းနှစ်ခုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ ချုံ့လက်စွပ်ဟာ combusion အခန်းဓာတ်ငွေ့၏ combusible အရောအနှောတံဆိပ်ခတ်ထားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရေနံလက်စွပ်ဟာဆလင်ဒါပယ်ပိုလျှံရေနံခြစ်အသုံးပြုသည်။
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug လက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ ကုန်သွင်းသူ
1D; အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug လက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ, 32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နေ့စဉ်ထုတ်ယူနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်1D အရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug ကိုလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 အတည်ပြုခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံး Professional ကအပြည့်အဝ gasket ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံစျေး - 1D; ONE
1D; ONE အကောင်းဆုံး Professional ကအပြည့်အဝ gasket ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံစျေး - 1D; ONE, ခိုင်ခံ့သောသုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါအပြည့်အဝ gasket ပြည့်စုံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်းဖြစ်ပါတယ်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Professional ကအပြည့်အဝ gasket ထုတ်လုပ်သူ
မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ, Pls ကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါ